I-Semi Detached Suite - Eduze neDolobha - I-Airbnb
I-Semi Detached Suite - Eduze neDolobha
339 okushiwo abanye
North Perth, Western Australia, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Annette
U-Annette Ungumbungazi ovelele
Indawo yakho eyimfihlo kakhulu ihlanganisa Igumbi lokulala elihle, Igumbi Lokuphumula eline-microwave, ifriji negedlela kanye neBathroom konke okubheke ichibi. Lesi sikhala singezansi esihluke kakhulu kunendlu enkulu. Sicela wazi ukuthi sihlala phezulu kodwa yonke indawo engaphansi ingeyakho ngaphandle kokuthi ilondolo yabiwe.
Igumbi lakho elizimele ngokuphelele / Igumbi Lokuphumula / Igumbi Lokugeza, elihluke ngokuphelele endaweni yokuhlala yomndeni:
Ezansi ukusuka engxenyeni eyinhloko yendlu kunekamelo lokulala elikhulu, igumbi lokugezela kanye negumbi lokuphumula. Uneyakho yokungena ngomnyango ongemuva noma ungakhuphuka ngengxenye enkulu yendlu.
Ikamelo lakho lokulala linombhede omuhle olingana nowendlovukazi onetafula eliseceleni kombhede nesibani, itafula lokugqoka, ikhabethe lezingubo zokugeza ezingu-2 ezinhle isibuko nefeni. Igumbi lokulala libheke ichibi.
Indlu yakho yokugezela inkulu futhi inendlu yangasese, ishawa engenalutho, okomisa izinwele kanye nesitimela sethawula elishisayo.
Indawo yakho yokuhlala inegumbi lokuphumula elinethezekile eline-TV neDVD enkulu engu-46 inch. Kunamafilimu amaningi nama-CD. Leli gumbi linesistimu ehlukanisayo yomoya ukuze uhlale ufudumele ebusika futhi upholile ehlobo. Unefriji lakho lebha elinegedlela netiye nezinsiza zokwenza ikhofi kanye ne-microwave.
Kukhona ukufinyelela kwe-inthanethi ye-WiFi futhi umshini wokuwasha/umshini wokomisa nokusansimbi kuyatholakala. Kukhona ne-BBQ eduze kwechibi. Kunikezwe wonke ilineni namathawula.
Ibhulakufesi - Izithelo & okusanhlamvu kuhlinzekwa futhi kungajatshulelwa endaweni yakho yokuphumula yangasese noma endaweni yakho engaphandle engaphansi ebheke ichibi elinokubukwa kwedolobha.
Ukuthathwa Kwesikhumulo Sezindiza:
Kwesinye isikhathi singahlinzeka ngokulandwa kanye nokwehla esikhumulweni sezindiza ngezindleko ezengeziwe. Isikhumulo sezindiza siyimizuzu eyi-15 ukusuka lapho. Izindleko ngu-$20 ukuya nokubuya kodwa hlola kuqala ukuze ubone ukuthi siyatholakala yini ukuze sithathe. Nginezinsuku ezimbalwa zokuphumula phakathi nesonto ngakho kuzoncika ukuthi ngikhululekile yini futhi ngingasebenzi.
Ngokuvamile izikhathi zokungena kuzoba ngu-14.00 kanti isikhathi sokuphuma singu-10.00am. Uma singenawo amanye amaklayenti azofika noma azohamba ngalolo suku, singavumelana nezimo. Ngazise isikhathi sakho sokufika ukuze sikufanele kangcono.
Indlu ihlezi emgwaqeni othule onamahlamvu futhi iseduze nedolobha. Le ndawo iphephile futhi inobungane futhi kukhona amapaki eduze. Ingxenye enkulu yendlu isezingeni lomgwaqo futhi yakhiwa ngeminyaka yama-40. Indawo yokuhlala eyinhloko, ikhishi kanye ne-balcony inokubukwa okumangalisayo kwedolobha. Ukwengezwa okusha kule ndlu kuphansi futhi kunekamelo lokulala, igumbi lokugezela kanye nendawo yokuphumula. Lapha yilapho izivakashi zethu zihlala khona. Ingxenye eyinhloko yendlu ihlala yithi kodwa siyajabula ukwabelana ngendawo yethu yokuhlala, ikhishi nendawo yokubhukuda.
Izithuthi zomphakathi zingamamitha angamakhulu ambalwa ukusuka emnyango ongaphambili ukuze kufinyeleleke kalula e-CBD nakwezinye izindawo ezingaphansi kwedolobha.
Indawo yokupaka ingaphambili kwendlu onqenqemeni lotshani.
Siyizithandani ezineminyaka ephakathi nendodana eneminyaka engu-20 ubudala. Sihambe kakhulu futhi siyakuthanda ukuhlangana nabantu abavela kuwo wonke umhlaba. U-Annette usebenza esikhumulweni sezindiza izinsuku ezimbalwa ngeviki kanti uSteve ungumcwaningi mabhuku osebenza ngokugcwele. Siphinde sibe nenja cavoodle okuthiwa Buddy.
Izindawo zokudlela ezinhle, imigoqo kanye netiyetha ziseduze naseMt Hawthorn, Leederville naseMount Lawley. Kukhona neNorthbridge ethe ukuqhela kancane ngo-2.5 km kuphela. Amabhishi asePerth aqhele ngamakhilomitha ayi-10 kuphela. Inkaba yedolobha iqhele ngamakhilomitha angu-3.4 kuphela.
Okungenani kukhona izindawo zokudlela ezi-4 kanye nesitolo samabhodlela esiseduze nekhona futhi ongakwazi ukuya khona.
Sithemba ukuthi uzokhetha i-B&B yethu futhi ube nokuhlala okujabulisayo!
4.94 out of 5 stars from 339 reviews
4.94 · 339 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-339
UAnnette Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- North Perth namaphethelo